WASIIRKA ARRIMAH DIBEDDA OO BEENIYEY LABA WAR OO KA SOO BAXAY LABA MASUUL: | Baligubadlemedia.com
WASIIRKA ARRIMAH DIBEDDA OO BEENIYEY LABA WAR OO KA SOO BAXAY LABA MASUUL:
Todobaadkii hore waxay warbaahinta gudaha iyo qaarka mid ahw arbaahinta caalmkuba faafiyeen lab war oo runtii aad u soo jiitay indhah dad badan oo daneeya arrimaha geeska Afrika. Arrinta hore waxy ku saabsanaynd booqashidii xogahya gaashaandhigga ingriisku ku tegay Hargeysa isagoo la kulmay madaxweyne Muse Bihixi iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirda iyo weliba si gaara saraakiisha sarasre ee ciidamada. Booqashad ka dib waxa soo baxay warar sheegaya in Ingruiisku damcsanyahay uu saldhiga milateri ka samaysto Somaliland. Muddo markii la wadawday, waxa arrintaa si la yaab leh u xaqiijiey wakiilka Somaliland u fadhiya Ethioipia oo sxaafadda caalamka u sheegay in wada-shaqeyn milatari iyo saldhig UK oo laga sameeyo Bebera, ay ahaayeen arrimihii looga hadlay kulankii wasiirka difaaca ee UK iyo madaxweynaha Somaliland.
Waxa iyana jirtay booqashadii uu wasiirka warfaafintu ee Somaliland ku tegay dalka Ingriiska, halkaas oo uu kulano gooni gooni ah kula yeeshay masuuliyiin ka tirsan hayado dawli ah iyo kuwa aan dawli ahaynba. Wasiirku wuxu isna si cad ugu sheegay saxaafadda in Ingriisku wakiil gaara u soo magacaabayo Somaliland kaas oo fadhgiisu noqon doono Addis Aabba. Arrintaasi waxay keentay dood badan oo saxaafadda iyo baraha bulshadaba aad u qabsatay. Inkastoo waikiilka Somaliland u joogta London ay dadka u sheegaty inaan arrintaasi sidaa loo sheegay ahayn ee cagta loo dhigo, haddana may noqon mid halkaa ku joogsata.
Ugu damabayn, Wasiirka Arrimaha dibedda ee Somaliland oo ah masuulka ugu habboon ka hadalka labadaa arrimoodba ayaa wareyska Geeska Afrika ee ka soo baxa u xaqiiijejey inaan labadaa rrimood midkoodna wax ka jirin.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon isaga oo ma ka hadalya arrinta saldhig milatari wuxuu yidhi “Saldhig Milatari oo uu Ingiriisku inaga doonayo si uu dalkeena uga samayso ma jirto, ma garanayo wararkaasi halkay ka yimaadeen.”
Wasiir Faratoon isaga o oak adlaya arrinat wakiilka UK u soo magaacaabayso Somaliladna wuxuu yidhi “Wax Safiira oo la inoo soo magacaabay oo aanu ognahay ma jiro, ee Inaga iyo Ingiriiska xidhiidh wanaagsan oo soo jireena ayaa inaga dhexeeya, si fiicana way inoo la shaqeeyaan, wax gaar ah se ma jiro, gabadhii inala shaqeeynaysay, ayaa la bedelay, oo qof kale ayaa lagu soo bedelay, awalna si fiican buu Ingiriisku inoola shaqeeynayey, waxaana ku rajo weynahay inuu xidhiidhkeena iyo wada shaqaynteenu inay sii socoto, oo ay intaas ka sii balaadhato”.
Labada arrimoodba halkaa ha lagu soo afjaro, dawladda ayay u taala siday ka yeelayso wasiirkeeda warfaafinta iyo wakiilkeeda u jooga Addis Ababa ee arrimahan aan jirin dadka u usoo bandhigay.